सेवा लिएपछि शुल्क तिर्नुपर्छ - Karobar National Economic Daily
सेवा लिएपछि शुल्क तिर्नुपर्छ
query_builderMarch 13, 2017 10:47 AM supervisor_accountएजेन्सी visibility1440
एचडीएफसी बैंक, भारतका प्रबन्ध निर्देशक आदित्य पुरी / तस्वीर :एजेन्सी
भारत सरकारले ठूला दरका भारु नोट खारेजी गर्ने गरेको निर्णयको विरोध गर्नु वा समर्थन गर्नुका लागि शब्द सजिलै खर्च नगर्ने एचडीएफसी बैंकका प्रबन्ध निर्देशक आदित्य पुरी भारतीय अर्थतन्त्र तथा आफ्नो बैंक आगामी दिनमा अझै राम्रो हुने बताउँछन् ।
भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि ठूला नोट खारेजीका कारण खासै असर नपर्ने तर्क गर्ने पुरी अवैधानिकरूपमा रहेको पैसाको विषयमा भएको असर बाहिर आइनसकेको तर्क गर्छन् ।
बैंकहरूले दिने सेवा सित्तैमा खोज्ने र आफूहरूले राखेको निक्षेपमा सक्दो धेरै प्रतिफल खोज्ने ग्राहकले सेवा लिएपछि शुल्क तिर्नुपर्ने तर्क गर्ने पुरीसँग इकोनोमिक्स टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको कुराकानीको अनुवादित अंश ः
आर्थिक तथ्यांक शंकास्पद भएको समयमा लगानीकर्ताले लगानी बढाउने गरेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ?
भारत धेरै सम्भावना भएको स्थान हो । यसमा कुनै प्रश्न नै छैन । यद्यपी यसमा कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क छैन । सेयर बजारले पनि यसलाई देखाइनै रहेको छ । लामो समयावधीमा विश्वको अनिश्चितताका बावजुद पनि भारत धेरै अवसर भएको स्थान हो ।
यदी हामीले सरकारले गरेको कामलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अपादर्शीताका विषयमा मैले कतै सुनेको छैन । यसलाई पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण कृषि तथा बजेटको फोकस र वित्तीय कन्सोलिडेसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । मैले सबै कुरा राम्रो छ भन्न खोजेको होइन । तर, निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
डिमोनिटाइजेसनका कारण कुल गाहस्र्थ उत्पादनलाई पारेको असर बाहिर आउँदैन भन्ने शंका गरिन्छ नि ?
डिमोनिटाइजेसनका कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । असर गरेको खण्डमा पनि धेरै न्यून हुनेछ । यदि डिमोनिटाइजेसन मार्फत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्छ भनेर विश्लेषण गरेका छौं भने त्यो सिएसओको जस्तै हो ।
सीएसओ पनि सोही तथ्यांकअनुसार आउने छ । त्यसैले डिमोनिटाइजेसनको असर गहिरो हुने सम्भावना छैन । डिमोनिटाइजेसनले अवैधानिक च्यानलमा रहेको पैसामा समेत पारेको असर देखिइसकेको छैन ।
हामीले यो २० वर्षको कुरा गरिरहेका छौं । त्यस्तो आपत्तिजनक ह्रास आउने छैन । के त्यहाँ अरु असर हुन सक्छ र ? पहिल्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता केही थिएन ।
डिमोनिटाइजेसनबाट के प्राप्त भयो त ?
वित्तीय प्रणालीमा धेरै पैसा आउँछ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ त ? ब्याजदर तल जान्छ त ? वित्तीय प्रणालीमा आएको पैसा कालो वा अवैधानिक कमाई हो भन्ने हुँदैन । वित्तीय प्रणालीमा कालो धन आउँदैन भन्नुको अर्थ करको आधार बलियो हुनु हो ।
कति भन्ने मलाई थाहा छैन । या त यसले १ देखि २ प्रतिशतको भन्ने निश्चित नभए पनि करको आधार बढ्नेमा म निश्चिन्त छु । यसले डिजिटल प्रणालीमार्फत् पारदर्शितालाई गति दिएको हो ।
यो देशमा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्रणालीमा जानु जस्तो उपयुक्त तरिका नै छैन । यसले डिजिटल प्रणालीलाई कम्तिमा पनि ३ वर्षअघि पुर्याएकाे छ । यदि सरकारको पेमेन्ट तथा रिसिप्ट डिजिटलाइज्ड भएमा यो नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो ।
निजी क्षेत्रको लगानी किन माथि उठ्न नसकेको हो ?
हामीसँग केही अधिक क्षमता भएको भन्ने समस्या छ । यसलाई सर्वसाधारणले बाह्य क्षेत्रसँग जोडेर हेरेको भए पनि यसको डिमोनिटाइजेसनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो नितान्त माग र आपूर्तिबीचको कार्य हो ।
यदि त्यो क्षमता प्रयोग गरिएर बजेटको योजनाअनुसार खर्च गर्न सकियो भने बल्ल तिनीहरूले पब्लिक क्षेत्रलाई खर्च गर भन्न सक्छन् । त्यसमा नीजि क्षेत्रको लगानीले पनि पछ्याउने छ । तर, त्यसले केही समय लिनेछ ।
वास्तविकतामा आपूर्तिका कारण माग बढाउन सकिँदैन । यदि हामी ७ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुग्यौं भने पहिलो त्रैमासमा केही असर देखिएला । तर, यो माथि आउँछ । यदि हामीले निजी क्षेत्र बिना नै ७ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथ गरेको खण्डमा नीजि क्षेत्रका लागि धेरै अवसर भएको स्थानमा चिनिन्छौं । त्यसपछि नीजि लगानी बढ्ने छ । तर, जीडीपी ८ प्रतिशतमा नै सिमित हुनेछ ।
दोहोरोे बासलातको समस्याबाट भारतीय बैंकिङ प्रणाली कहिले मुक्त हुन्छ ?
फलाम वा स्टिल क्षेत्र पछिल्लो समय समस्यामा परेको छ भन्ने होइन । यसअघिको सरकारले त्यो क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न नसकेको हो । त्यहाँ २ प्रकारका समस्या छन् । यो धेरै लामो समयदेखि बोझको रूपमा रहँदै आएको छ ।
हामीसँग च्याप्टर ११ बैंक करप्सी ल को व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या भएको हो । केही सम्पत्तिको वास्तविक भ्यालुएसन र त्यसको कर्जाले आवश्यकताको सन्दर्भमा बैंकले मात्र समाधान गर्ने समस्या होइन ।
बैंकहरूले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग अर्को लेभलको सुधारको माग गरिरहेका छन्, के यसले साँच्चिकै समस्या समाधान गर्छ त ?
यस विषयमा मेरो बिचार अन्यको भन्दा केही फरक छ । यस विषयमा क्यानलाई हानेर सडकमा लडाउनु भनेको समस्याको समाधान होइन भनेर डेप्युटी गभर्नरले भनेको भनाइ हो ।
त्यसो हो भने तिमीले कूल कर्जा मात्र जोड, जब दीर्घकालीन डेब्ट समान रहन्छ । किनकी त्यो नै क्यास फ्लोको काम हो । यतिसम्म हो की कस्तो खालको सुधारलाई हेरिएको छ ।
कस्तो तवरबाट गएको खण्डमा कम्पनी दिगो रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा भ्यालिड हो । यो भनेको सम्भाव्यता अध्ययनविनै अझै छुट दिनु हो । तव यो खराव आइडिया हो । पुनर्संरचना खराव कन्सेप्ट होइन, तर पुनर्संरचनालाई गलत प्रयोग गर्नु खराव आइडिया हो ।
खराब बैंकको सन्दर्भमा तपाईको के बुझाइ छ ?
यस सन्दर्भमा आधारभूत रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको समस्याको साइज कत्रो हो भन्ने पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले या तिमीले एआरसी वा खराब बैंक वा एस ४ ए को विषयमा कुरा गर, त्यसमा न्यूनतम तथ्य बुझनु जरुरी हुन्छ ।
खराब बैंकका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै समस्या बचेका हुन्छन् । तिमी जे गर्छौ, त्यसको अन्त्यमा त्यो आईसीयुभन्दा बाहिर आउने सम्भावना हुन्छ ।
तपाईं एक्सिस बैंकमा जानका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ । यसबारेमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हालको अवस्थामा म एक्सिस बैंकमा जाने कुरा गरेको छैन । जहाँसम्म सरकारको चासोको विषयमा त्यहाँ एउटा स्थापित प्रक्रिया छ । वास्तवमा ३० प्रतिशत सेयरधनी रहेको अवस्थामा सरकारको पनि केही भनाई हुनेछ । त्यसमा पनि या तिनीहरूले स्टक स्वाप गर्न खोजेका हुन् की नगद कारोबार ? त्यसैले मैले केही भनेको छैन ।
व्यवसाय वृद्धि रणनीतिका बारेमा तपाईंको धारणा के हो ?
एचडीएफसी बैंकको सन्दर्भमा अहिले हामीले हालसम्मकै उपयुक्त समय पाएका छौं । भारतका निम्ति वित्तीय सेवाले अधिक आपूर्ति खोज्छ । हामीलाई सेमी अर्वान र ग्रामीण भारतबाट सुरु गर्न दिनुहोस् ।
त्यसमा निकै मुस्किलले केही व्यक्ति होलान् सम्पत्तिको पक्षमा । यो भर्चुअल मोनोपोली हो । यदि वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर एकीकृत नभएको वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिरका सर्वसाधारण हेर्ने हो भने मेरो बैंकको प्रडक्ट ग्रामीण भेगका कुना कुनामा पुगेका छन् ।
तपाईंले भर्खर भन्नुभयो वालेट भायवल विजनेस होइन भनेर, यसको भविष्य के हो त ?
मैले बालेट इकोनोमीकल्ली भायवल छैन भनेको हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने के छ ? तपाईंले मलाई ५ सय रूपैयाँँ दिनुहुन्छ । मैले तपाईंलाई २ सय रूपैयाँ दिन्छु । त्यो भायवल विजनेस होइन ।
त्यसैले सबैसँग वालेट हुन्छ । त्यसमा यूपीआई छ । त्यसैले मैले भन्न खोजेको तपाईंले लगानी गरेको पैसा निश्चित समयपछि प्रतिफलमूखी हुनेछ भन्ने योजना वा प्रस्तावसहित आउनुपर्छ भन्ने हो ।
पेमेन्ट बैंकका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
तिनीहरूले के गर्न गइरहेका छन्, त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । आजको मितिसम्म एउटा मात्र सुरु भएको छ । बैंकहरूले बचतखातामा नै ७ प्रतिशतको ब्याजदर दिएका छन् ।
पेमेन्ट बैंकको म्यान्डेडअनुसार उसले टे«जरीमा लगानी गर्नुपर्छ । म एउटा मुख्य पेमेन्ट बैंक हुँ । तिम्रा व्यक्तिले भनेको कुरामा म दण्डित भएको हुँ । भारतको बैंकिङ शुल्क विश्वकै सस्तोमा पर्छ । तपाईं होसियार हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ । हामीले मुस्किलले लिएको शुल्कको विषयमा पनि बैंकहरूलाई अरोप लगाउनुहुन्छ ।
तर, निक्षेप राख्न र झिक्नका लागि ?
यदि तपाईंले एक्सेप्सनल क्यासको अमाउन्ट जम्मा गराउनु भएको भएको छ भने यसको कस्ट लाग्छ । मेरा टेलरले काउन्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि यो सेफ डिपोजिटमा राखिन्छ । तपाईं पुनः पैसा झिक्न आउनुहुन्छ । यसका लागि खर्च लाग्छ । तपाईंले मलाई तिर्नुपर्छ । म कुनै निःशुल्क व्यवसायी होइन । मैले सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, तपाईंहरूले उनीहरूको निक्षेपबाट कमाई गरिरहनुभएको छ नि ?
तपाईंले यो प्रश्न सोधेकोमा खुशी छु । उदाहरण दिउँ, हामीले १०,००० रूपैयाँको कुनै बचत बैंक निक्षेप पाउँछौं । मैले त्यसमा ४ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । ४ प्रतिशत मैले सीआरआरमा राख्नुपर्छ ।
मैले करिब २०० सय रूपैयाँ जति एक वर्षमा कमाउँछु । यो २०० रूपैयाँमा तपाईं सबै के चाहनुहुन्छ ? निःशुल्क एटीएम सेवा तपाईं चाहनुहुन्छ । तपाईं चेकबुक सेवामा कुनै शुल्क चाहनुहुन्न, नगद कारोबारमा तपाईं कुनै शुल्क तिर्न चाहनुहुन्न । यदि स्टेट बैंक अफ इन्डियाले भन्छ यसका लागि न्यूनतम मौज्दात कम्तिमा ५००० हजार भारु खातामा राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तब के बोल्यो बेचारीले (अरुणधती भट्टाचार्यले के भनेकी छन् ?) तपाई कति उनीहरू कमाउँछन र गुमाउँछन भन्नुहुन्छ ? बैंकलाई दण्डित गरिराख्नु र तब तपाईंले भन्नु हुनेछ कुनै खराव कर्जा उठाउनुपर्ने छैन ।
व्यापारीहरूको कार्ड (एमडीआर) कारोबारबारे के कस्ता शुल्क छन् ? सीएम प्यानलले केही कारोबाहरूमा शून्य शुल्कको सिफारिश गरेका छन् नि ?
एमडीआर कारोबार लागतका आधारमा हुन्छ । यदि सरकारले निःशुल्क चाहन्छ भने त्यो ठीक छ । त्यसो भए उनीहरूले टर्मिनलहरू खडा गर्नुपर्छ । यदि मैले टर्मिनलहरू राख्नुपर्छ र उनीहरूले निःशुल्क यो पाउनुपर्छ भनेर तपाईंले भन्न खोजिरहनुभएको छ ।
मैले लुइस भुइटन वा प्यान्टालुन वा ताज होटलहरूमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । उनीहरूको बिक्री (सेल्स) बढी रहेको छ, उसले स्विपिङ गरिरहेको छ साथै उसले मलाई तिरिरहेको छ । मैले लुइस भुइटन वा प्यान्टालून वा ताज होटलहरूलाई किन अनुदान दिनुपर्छ ?
मैले उसलाई किन अनुदान दिनुपर्छ ? साना किरानन पसलहरू, हामीले जसलाई यो युपीआई छ वा न्यूनतम् शुल्कभन्दा माथि आइरहेको फेला पार्नेछौं, त्यसलाई अनुदान दिने बाटो किन खोज्नु पर्छ । कसैले यसमा अनुदान वा सहुलियत उपलब्ध नगराएसम्म शून्य शुल्कको सम्भाव्यता छैन ।
बैंकका लागि तपाईंले निर्धारण गरेको वृद्धिको मार्गचित्र तपाईंले बैंक छोडेर गएपछि पनि निरन्तर रहन्छ ?
हो, तर म बैंकलाई हतारमा छोडिरहेको छैन । भविष्यका लागि तय गरिएको मार्गचित्र जसलाई तपाईंले हेर्नुहुन्छ । व्यवस्थापनको पदानुक्रमहरू पनि परिवर्तन हुनेछन् । पदानुक्रम व्यवस्थापन डिजिटल जगतको एक मुख्य प्रणाली हो ।
त्यसैले रणनीतिहरू सानो समयका लागि हुन्छन् किनकी विश्व बदलिन्छ । त्यसैले अगुवाहरू मध्ये पहिला हुने छन् र तपाईंको प्रतिक्रियाको समय धेरै तीव्र हुनुपर्नेछ । मैले चार वर्ष अझै पार गर्नुपर्छ । मार्गचित्रलाई भविष्यका लागि स्पष्ट पार्नेछु ।
हामीसँग भित्र÷बाहिरको जहाँसुकैका लागि गहिरो बुझाइ छ । म सेवा निवृत हुन एक वा दुई वर्ष अघि नै मेरो उत्तराधिकारीको मनोनयन हुनेछ । तर मैले यसलाई पहिले छाड्नेछु भने मैले मेरो प्रभावकारिता पनि गुमाउनेछु । तपाई यसमा सहमत हुनुहुन्न र ?
भारु नोट खारेजी आदित्य पुरी